The OnePlus 3 EuroTour rutere Spain na ụbọchị abụọ | Akụkọ akụrụngwa
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị kwuru okwu banyere atụmatụ na-akpali mmasị nke ụlọ ọrụ China OnePlus nwere banyere njem ụgbọ ala nke obodo ndị ọrụ ahụ ahọrọla na nnọkọ ụlọ ọrụ ahụ nke mere na ị nwere ike ịhụ ma metụ ọnụ ọgụgụ a dị egwu a na-akpọ flagship killer site na ika ahụ n'onwe ya.
Eziokwu bụ na ọ dị anyị ka ụzọ kachasị mma iji gosi onye ọ bụla chọrọ igwu egwu na ịgbachi ngwaọrụ ahụ ogologo oge. Okwesiri ighota na nzipu onu ahia a bu ntaneti na enweghị nhọrọ iji hụ ngwaọrụ ma ọ bụ jide ya ọzọ karịa nzụta gị, ya mere echiche a dị anyị ezigbo mma.
Ugbu a, ọ bụ oge nke ndị ọrụ bi na Madrid ma ọ bụ ndị nọ na obodo na July 21. Iji hụ na ngwaọrụ ị ga-adị site na 17: 30 rue 21: 30 elekere na La Vaguada Shopping Center na Madrid. Ozugbo ọ ruru ebe ahụ, ọ ga-adị mkpa ịgbaso nnweta na njedebe nke ụlọ ọrụ China maka mbata na ebe ha ga-esi kọwaa anyị omume ọma ya yana inwe ike imetụ ya aka na enweghị nsogbu na ebe ihe ịtụnanya bụ na CEO nke ụlọ ọrụ Carl Pei ga-anọ.
Ebumnuche a doro anya na-eme ka ihe karịrị otu chee banyere ịzụrụ ngwaọrụ ahụ ebe ọ bụ na inwe obi abụọ banyere ya ga-agbasa ozugbo. E wezụga Madrid, Thegbọ ala ahụ ga-aga obodo Barcelona, ​​ebe ị nwere ike ịga leta ha na Mirador del Port Vell site na 16: 00 pm ruo 20: 00 pm na July 23. Ọ bụrụ na ị nwere ike, egbula oge ịkwụsị, ọ ga-eju gị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » The OnePlus 3 EuroTour rutere Spain na ụbọchị abụọ
A ga - ewepụta Samsung Gear S3 ọhụrụ na Septemba 1 dị ka mkpọsa